बदामको नियमित सेवनले कब्जियत हुनबाट बचाउँछ ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । स्वास्थ्यका लागि बदाम निकै लाभदायक मानिन्छ । बदामको स्वाद मिठो हुन्छ, जसको कारण पनि हामीले बदाम खाने गर्दैछौं । बदाममा प्रसस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ, जुन शरीरको बृद्धि–बिकासका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै बदाममा प्रसस्त मात्रामा आइरन, क्याल्सियम र जिंक पनि पाइन्छ । बदाम खाँदा शरीरलाई ताकत पनि दिन्छ । आज हामीले नियमित बदाम खाँदा स्वास्थ्यालाई हुने फाइदाहरुको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौं ।
नियमित बदामको सेवनले स्वास्थ्यमा निम्न फाइदा गर्छः
– कब्जियत हुनबाट बचाउँछः
यदि तपाई कब्जियतको समस्याबाट गुज्रिरहनुभएको छ भने एक सातासम्म नियमित १०० ग्राम बदाम खानुहोस् । यसो गर्नाले तपाईको पेटमा भएको सारा समस्याहरुबाट तपाईलाई छुटकारा मिल्छ र केही भएपनि राहत मिल्छ । यसको नियमित सेवनले कब्जियतको समस्याबाट टाढा राख्छ ।
– शरीरलाई ताकत दिन्छः
जसरी अण्डाको सेवनबाट शरीरमा उर्जा मिल्छ, त्यसरीनै बदामको सेवनले पनि शरीरमा उर्जा दिन्छ । यसका साथै नियमित बदामको सेवनले पाचन प्रक्रियालाई पनि तन्दुरुस्त बनाउँछ । अझ भन्नुपर्दा जाडो समयमा यसको सेवन निकै उपयोगी मानिन्छ ।
– गर्भवती महिलाका लागि फाइदाः
गर्भवती महिलाले बदाम खानु आवश्यक छ । नियमित बदाम सेवन गर्नाले गर्भमा बढिरहेको बच्चाको बृद्धि/बिकासमा पनि सहयोग गर्छ । साथै गर्भवती महिलालाई ताकत पनि प्रदान गर्छ ।
– त्वचाको लागि फाइदाः
ओमेगाले भरिपूर्ण बदामले त्वचालाई कोमल र नरम बनाउन मद्दत गर्छ । कयौंले बदामको पेस्ट बनाएर फेसप्याकको रुपमा प्रयोग पनि गर्दै आएका छन् । यस्तो फेसप्याकले जाडो समयमा पनि त्वचालाई नरम बनाइराख्न सकिन्छ ।
–मुटु रोगबाट टाढा राख्छः
नियमित बदामको सेवनले मुटु सम्बन्धि विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउँछ । बदाम खाइराख्ने मानिसलाई मुटु रोग प्राय लाग्दैन । यसका साथै बदामको नियमित सेवनले शरीरमा रगतको कमी हुन दिदैन ।
access_time 4:07 pm
अमर काफ्ले, इनरुवा, १६ फागुन । सुनसरीको इनरुवामा मेयरकप रात्रिकालीन भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ
काठमाडौं, १६ फागुन । बच्चा बोकेकी महिलामाथि निर्ममताका साथ लाठी प्रहार ! नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा